‘प्यारो जलजला’ : चुनु गुरुङको अजम्बरी गीत – www.janabato.com
‘प्यारो जलजला’ : चुनु गुरुङको अजम्बरी गीत
१६ भाद्र २०७५, शनिबार ०२:४४ September 1, 2018 Janabato Online
कुनै पनि शर्तमा झुक्नु भएन, दुश्मनका सामु पटक्कै लत्रिनुभएन र क्रान्तिप्रति गद्दारी वा आत्मसमर्पण गर्नुभएन । पार्टी, क्रान्ति र आन्दोलनलाई क्षति पु¥याउने सबै सम्भावनालाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गरेर कठोर यातना, असह्य पीडा, चरम यन्त्रणालाई पचाउँदै निष्ठापूर्वक बलिदानलाई स्वीकार गर्नुभयो–उहाँले ।
दीनदुःखीहरुको मुक्तिका लागी समर्पित, सङ्घर्ष र बलिदानको प्रतीक, क्रान्तिको वेदीमा आहुत–वर्गसङ्घर्षकी अग्रणी एवं सांस्कृतिक योद्धा हुनुहुन्थ्यो–कमरेड चुनु गुरुङ । उहाँ जनताका कलाकार मात्रै होइनन्, कुशल सङ्गठक र कवि पनि हुनुहुन्थ्यो । उत्पीडित जाति र समाजमा हुर्किनु भएकी उहाँ सानैदेखि विद्रोही स्वभावकी हुनुहुन्थ्यो । उहाँले सम्पूर्ण जीवन क्रान्तिमा समर्पित गर्नुभयो । संसार बदल्ने, न्याय, समानता सहितको सुन्दर जीवन प्राप्त गर्ने लडाइँमा उहाँको योगदान अनुपम रहेको छ । शब्द र कर्मको तादाम्यता चुनुको जीवन हो । निरन्तर क्रान्ति र विचारको अविछिन्न शृङ्खलामा त्याग र समर्पणको प्रतीक बन्योे–उहाँको जीवन ।
राजनीतिसंगै सांस्कृतिक जिम्मेवारी
उहाँ सानैदेखि विद्रोही स्वभावकी हुनुहुन्थ्यो । उहाँको पारिवारिक सूचनाका आधार र उहाँको व्यवहारले पनि यो कुरा पुष्टि गरेको छ । उहाँले माध्यमिक शिक्षासम्म अध्ययन गर्दै गर्दा सांस्कृतिक फाँटमा रहेर काम सुरु गर्नुभयो । गायन, नृत्य, गीत लेखन र अभिनयमा शक्तिशाली प्रतिभा उहाँ ०४८ सालमा केन्द्रीय सामना परिवारको सदस्य र पछि क्षितिज परिवारकी नेतृ पनि हुनुभयो । सोही क्रममा गीतिक्यासेट प्रकाशन हुँदा आधादर्जन गीतहरुमा उहाँले स्वर दिनुभयो । सुमधुर स्वरका धनी कमरेड चुनुले सांस्कृतिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभयो । उहाँ अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक महासंघको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो । जतिखेर उहाँको सहादत भयो त्यतिवेला उहाँ नेकपा (माओवादी) की वरिष्ठ जिल्ला सदस्य र क्रान्तिकारी जनपरिषदकी केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो । मूलतः उहाँ राजनीतिक विचारले परिपक्क, कुशल संगठनक, दृढ विचारक, शसक्त प्रतिभाशाली कलाकार, जुझारु योद्धा हुनुहुन्थ्यो । काठमाडौंमा हुने सामना परिवार केन्द्रीय टोलीको सांस्कृतिक कार्यक्रमहरुमा गीत तथा अभिनयका साथै राजनीतिक प्रशिक्षणहरुमा उहाँ सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । उहाँले पाल्पा, चितवन, कास्की, रुपन्देही र काठमाडौंमा सांस्कृतिक अभियानको प्रत्यक्ष नेतृत्व र सहभागिता जनाउनुभयो । उहाँ आफ्नो समग्र जीवन वर्गयुद्धमा होम्नुभयो । मरेर पनि बाँचिरहने अमर व्यक्तित्वहरुको नाममा कमरेड चुनु गुरुङ कहिल्यै नमेटिने इतिहास बन्नु भएको छ ।
एकैसाथ बधाई र समवेदनाका पुष्पगुच्छा
पाल्पाको दोभानमा २०२८ पुषमा जन्मिनु भएकी चुनुको पिताको नाम धनवहादुर गुरुङ हो । जनयुद्धको क्रममा विवेक (कीर्ति तिवारी) संग उहाँको विवाह ०५६ वैशाख २ गते भयो । तर बिडम्बना ! प्रतिक्रियावादी सत्ताले ‘किलो शेरा टु’ को दमन, हत्या र आतङ्कको हवनकुण्ड मच्चाइरहेको थियो र कमरेड चुनु र विवेक वीच विवाह भएको ३१ दिनमा नै कमरेड विवेकको सहादत भयो । कमरेड चुनुले विवाह भएको छोटो अवधिमा नै आफ्नो जीवनसाथी सदाको लागी गुमाउनु प¥यो । कमरेड चुनुले आफ्नो जीवन साथी गुमाउनु पर्दाको भयायक पीडा बोकेर मृत्युको बदला लिन क्रान्तिको पक्षमा अविचलित लड्नुभयो । एकातिर विवाहको बधाई आइरहयो र अर्कोतिर जीवनसाथीको मृत्युको दारुण खबर । फेरि पनि उहाँ आफ्नो कर्मपथबाट कहिल्यै विचलित हुनुभएन । उहाँ सङ्घर्षको यात्रामा बढ्दै निरन्तर क्रान्तिधारामा बग्नुभयो ।
गिरफ्तारी र यातना
भूमिगत कालमा २०५८ सालको माघ २३ गते कास्कीको भरतपोखरीबाट उहाँलाई प्रहरीले गिरफ्तार ग¥यो । करिब दुई महिना वेपत्ता पा¥यो । पछि सैनिक र अन्य गोप्य स्रोतबाट उनी पोखराको फुलवारी ब्यारेकमा, चरम यातनाका साथ, आँखामा कालो पट्टि बाँधेर राखेको तथ्य बाहिर आयो । “उहाँलाई नाङ्गो पारेर सिस्नोपानी लगाइएको, पानीमा चोबलिएको र चरम यातना दिइएको” सूचनाहरु बाहिर आयो । त्यहीबेला आँखामा पट्टि बाँधिएका अरु धेरै बन्दीहरुले पनि उहाँलाई बोलेको सुनेको र देखेका थिए । यातनाका नारकीय खण्डहरहरुमा पत्रकार राजु क्षेत्रीले आफ्नो संस्मरणमा उहाँलाई ब्यारेकमा यातना दिँदाको दृश्य बर्णन गर्नुभएको छ । दृष्टहरुले उहाँसंग केरकार गर्दा पार्टीको गोप्यता भङ्ग गरे, सुराकी दिए, एकजना मात्र माओवादी नेताको ठेगाना बताइदिए जीवन–दान दिने शर्त राखेका थिए । तर, उहाँ कुनै पनि शर्तमा झुक्नु भएन, दुश्मनका सामु पटक्कै लत्रिनुभएन र क्रान्तिप्रति गद्दारी वा आत्मसमर्पण गर्नुभएन । पार्टी, क्रान्ति र आन्दोलनलाई क्षति पु¥याउने सबै सम्भावनालाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गरेर कठोर यातना, असह्य पीडा, चरम यन्त्रणालाई पचाउँदै निष्ठापूर्वक बलिदानलाई स्वीकार गर्नुभयो–उहाँले ।
केही कुरा प्राप्त गर्न नसक्ने भएपछि दुष्टहरुले उहाँलाई पछि, अँध्यारो रातमा, जङ्गलका बीचमा, खोल्सामा लगी, कायरतापूर्वक गोली हानेर हत्या ग¥यो । उहाँको सहादत ०५९ असार ८ गते भएको अनुमान गरिएको छ । हत्यापछि कमरेड चुनुलाई बाग्लुङ–पोखरा सडक खण्डको एउटा खोलाको किनारामा लगेर गाडिएको भन्ने सूचनाहरु बाहिर आएपनि प्रमाण वा तथ्यहरु अझै प्राप्त भएका छैनन् ।
अग्रगामीचेत र विद्रोहका उत्कृष्ट स्रष्टा
कमरेड चुनु गुरुङ कवि हुनुहुन्थ्यो । उहाँका कविताहरु युगीन जीवन र यथार्थका अभिब्यक्तिहरु हुन् । उहाँले कवितामार्फत सामन्ती समाज, गरिबहरुको दर्दनाक जीवन–दशा, अभाव र विपन्नताको कहर, सामन्ती राज्यव्यवस्थाको निर्मम दमन–यातना र उसको आतङ्मय ताण्डव लीला र वर्गसंघर्षको परिवेश चित्रण गर्नुभएको छ । कुरुप यथार्थको सत्य लेखेर पनि त्यसमा आशा, जीवन र भविष्यका सपनाहरु चित्रण गरिएका उहाँका कविताहरु क्रान्तिकारी आशावाद र मुक्तिकामी स्वरहरु मुखरित रहेको छ । उहाँले लेख्नुभएको लामो कविता बेलीसरा शसक्त कविता हो । यसमा उहाँले रुकुम र रोल्पाका नारीहरुको प्रतिरोधी क्षमता, क्रान्तिकारी अन्तरवृत्ति, क्रान्तिप्रतिको समपर्ण भाव, क्रान्तिकारी कार्य, गाउँहरुको गाउँले शैलीमै युद्धमा सक्रिय सहयोग र सहभागिता, नारीहरुमा पैदाको भएको क्रान्तिको उत्साह, दुश्मनलाई छल्ने शैली र भ्रम छर्ने पद्धति, खेतवारी, गोठालो, पँधेरो, घाँसपात गर्दा तिनका प्रत्येक कार्यहरुमा अभिव्यक्त भएको जनयुद्धको भावनात्मक सम्बन्धहरुको चित्रण सजीव ढंगले प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
‘प्यारो जलजला’ : जनताका अजम्बरी गीत
कमरेड चुनुका गीतहरु सुन्दर सपनाका गीत हुन् । प्यारो जलजला, क्रान्तिप्रेम, महान आदर्श र मुक्तिप्रति समर्पणभावले ओतप्रोत उहाँको सुन्दर र उत्कृष्ट गीतहरु हुन् । “प्यारो जलजला” गीतको शब्द, स्वर र सङ्गीत उहाँको सुन्दर रचना हो । क्रान्तिकारी सांस्कृतिक आन्दोलनमा यो गीत निकै चर्चित र स्थापित रहेको छ । जलजला पहाडलाई प्रतीक बनाएर क्रान्तिचेतको गायन यसमा रहेको छ । यसमा स्वर, शब्द र गायन उहाँको आफ्नै हो । देशको माया, वर्गीय माया, क्रान्तिको माया र जलजलाको सौन्दर्यको मायामा ज्यानै गएपनि दिन तत्पर हुनु भएकी कमरेड चुनु उत्सर्गशील, उदात्तताभाव र चेतना भएकी योद्धा हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा प्रष्ट हुुन्छ । वर्गीय मायाको आँचलमा छातीभित्र लुकाएर ममताको न्यानो दिँदै, स्पन्दनभित्र जोगाउँदै दुश्मनसंग लुकाएर हुकाईराख्ने त्यो जलजला क्रान्ति हो, मानवीय प्रेम हो, जीवनको आस्था हो, सङ्घर्षको सौन्दर्य हो, वर्गचेतना हो, सुन्दर नयाँ संसारप्रति आत्मीयता बोध र सामिप्यता हो । प्रत्येक दिन जलजलाको शीरमा झुल्किने रातो क्षितिज क्रान्तिको प्रतीक हो र नयाँ सङ्कल्पको उषा हो भन्ने कुरा गीतमा अभिव्यक्त भएको छ ।
अन्त्यमा थोरै जीवन बाँचेर महान् मृत्यवरण गर्नु भएकी महान् सांस्कृतिक योद्धा कमरेड चुनु गुरुङ क्रान्तिकारी जनसांस्कृतिक आन्दोलनको ढुकढुकीमा बाँचिरहनु भएको छ । उहाँ वर्गप्रतिबद्ध र क्रान्तिकारी स्रष्टा हुनुहुन्थ्यो । कला र साहित्यको क्षेत्रमा उहाँको योगदान अविस्मरणीय रहेको छ ।
(स्रोत–झुल्केघाम पूर्णाङ्क–३, असार २०७५)
← विप्लब निकट क्रान्तिकारीका विद्यार्थी नेता बन्जाडे मृगौला पिडितको सहयोगमा जुट्दै
श्री सिद्धबाबा माविमा विद्यार्थी केन्द्रित book Tailk ७औं कार्यक्रम सम्पन्न →
को हुन् यी पोशाक लगाउने नेपाली ?
२६ मंसिर २०७४, मंगलवार ०८:५० Janabato Online Comments Off on को हुन् यी पोशाक लगाउने नेपाली ?
१२ कार्तिक २०७४, आईतवार १२:११ Janabato Online Comments Off on नेकपाले गर्यो भुमिगत शैलीमा मसाल जुलुस
लागुऔषध सहित बुटवलबाट एक व्यक्ति पक्राउ
९ जेष्ठ २०७६, बिहीबार १४:३९ Janabato Online Comments Off on लागुऔषध सहित बुटवलबाट एक व्यक्ति पक्राउ